Al-Shabaab oo soo bandhigtay sargaal ka soo goostay Dowladda | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo soo bandhigtay sargaal ka soo goostay Dowladda
Kooxda AL-Shabaab ayaa soo bandhigtay sarkaal ka tirsanaa ciidanka Dowladda, kaas oo soo goosashadiisa ay hore u baahisay keydmedia Online.
BAKOOL, Soomaaliya - Sida ay Keydmedia Online baahisay todobaadkii hore, mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ee ku sugnaa xarunta Gobolka Bakool ee Xudur, ayaa uu u goostay dhanka Kooxda Al-Shabaab.
Sarkaalkaan oo lagu magacaabo Mustafa Macallin Xasan, ayay ugu danbeyn Kooxda Al-shabaab, ku soo bandhigeen degaanka Garas-Weyne oo hoos taga degmada Xudur, isla-markaana ay gacanta ku hayaan Kooxda Al-Shabaab.
Sida ay tabinayaan warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab, Mustaf Xasan, ayaa lagu soo bandhigay goob fagaaro ah, oo ku taalla Garasweyne, ka hor inta aan mar kale lagu soo bandhigin degaanka Buula Fuulay.
Warbaahinta Al-Shabaab, waxa ay xuseen in Mustafa Macallin Xasan, uu go’aansaday inuu dib ugu laabto shacabnimadiisii hore, kana dhex baxo arrimaha ciidamada, hayeeshee, khabiir dhanka amniga ah ayaa KON u sheegay in taasi tahay qiddad ay ku soo xera galinayaan askar cusub oo ka baxa garabka Dowladda.
Mustafa Macallin Xasan wuxuu ka soo goostay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ka dib markii uu muddo dheer ka tirsanaa qeybta 144aad, guutada 9aad ee ciidanka qaranka [SNA] wuxuuna ka qeyb qaatay dagaallo badan oo horseeday in kooxda looga xoreeyo degaanno muhiim ah.